नहास्ने मान्छे छिट्टै मर्छन् रे ! | suryakhabar.com
Home स्वास्थ्य नहास्ने मान्छे छिट्टै मर्छन् रे !
on: २६ बैशाख २०७५, बुधबार १४:४९ In: स्वास्थ्यTags: No Comments
काठमाडौं । आजभोली हामी हासो बिर्सिदैँ गएका छौँ । हासो स्वास्थ्यको पहिलो बुदा हो । आजभोली समाजमा महिला मात्रै हास्छन् । महिलाको तुलनामा पुरुष कम हास्छन् । कम हास्ने मानिस छिट्टै मर्छन् रे । हास्नु स्वास्थ्यका लागि फाईदाजनक भएको विश्वका सबै अनुसन्धानबाट देखाएको छ । हासो निशुल्क औषधी हो । हास्नुका फाईदाहरु अनगिन्ती छन् ।
हाँस्ने व्यक्तिको सोच सकारात्मक हुन्छ : हाँस्ने प्रक्रियाको दौरानमा शरीरमा इन्डोर्फिन नामक हार्मोन बन्छ । जो पुरा शरीरमा सुखद अनुभव तथा सकारात्मक सोच भरिदिन्छ । यो हार्मोनले मुड् फ्रेस गर्न समेत मद्धत गर्छ । – एजेन्सी
२६ बैशाख २०७५, बुधबार १४:४९